siteadmin, Author at khabarbox.com.np - Page6of 74khabarbox.com.np
Posts By: siteadmin
२५ हजार घुससहित पक्राउ परेका अधिकृतलाई राष्ट्रपतिले विभूषण दिँदै
Posted 3:09 am by siteadmin & filed under सामाजिक.
काठमाडौं । ३ असोजमा संविधान दिवसका अवसरमा घोषणा गरिएका विभूषण १ वैशाखमा राष्ट्रपतिको हातबाट वितरण हुँदै छ। तर, विभूषण पाउने सूचीमा घुससहित पक्राउ परेका कर्मचारीसमेत छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रशासकीय अधिकृत कैलाश मातक्षे श्रेष्ठ २ फागुनमा २५ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका थिए। उनी गृहमन्त्रालयले दिने प्रबल जनसेवाश्री विभूषण पाउने सूचीमा छन्। अख्तियार दुरुपयोग… Read more »
चापागाँउ सडकको वैकल्पिक मार्ग सुनाकोठीमा बन्यो
Posted 2:09 pm by siteadmin & filed under सामाजिक.
२७ चैत्र ०७५, सुनाकोठी । दक्षिण तथा मध्यललितपुरका बासिन्दाहरुका लागि खुशीको समाचार छ अव सुनाकोठीको जामका कारण सास्ती खेप्नु पर्ने छैन । सुनाकोठीको बुद्ध पोखरीदेखि भित्री बाटो सिमाकोसम्म खुलेपछि २० फिटे वैकल्पिक सडक बनेसँगै सडकको सास्ती हट्ने भएको हो । प्रदेश सासंद राजकाजी महर्जन सातदोवाटो चापागाँउ सडक विस्तारको लागि सुनाकोठीको बैकल्पिक सडक उपयोगी हुने तर्क… Read more »
ललितपुरको ठेचोको एक कुखुरा फार्ममा वर्डफ्लुको संक्रमण देखियो
Posted 2:39 am by siteadmin & filed under सामाजिक.
ललितपुर : करिब दुई साता पहिला ललितपुरको ठेचोको एक कुखुरा फार्ममा वर्डफ्लुको संक्रमण देखियो। तर, ती कुखुरा त्यहाँ उत्पादन भएका थिएनन्। काठमाडौको तारकेश्वर नगरपालिकाको फार्मबाट ल्याइएका थिए। भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डाक्टर नारायण बहादुर श्रेष्ठले ती कुखुरा तत्काल नष्ट गरेको बताए। ‘काठमाडौबाट वर्डफ्लु ललितपुर छिरेको हो’, उनले भने, ‘त्यस घटनापछि ललितपुरका अन्य… Read more »
पछुवा गाडीको ठक्करले ज्यान गुमाएकी तीन वर्षे छोरीको झझल्को
Posted 7:31 am by siteadmin & filed under सामाजिक.
कसिस्मा मिजार दुई वर्ष पुगेर तीन लाग्न दुई दिन मात्र बाँकी थियो। बाबु सुन्दर र आमा कविता आफ्नो पहिलो सन्तानको ‘बर्थ डे’ मनाउने तयारी गर्दै थिए। त्यही बेला यस्तो बज्रपात भयो, उनीहरूले छोरीको ‘बर्थ डे’ कहिल्यै मनाउन पाएनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पछ्याउँदै हिँड्ने सुरक्षाकर्मीसहितको पछुवा गाडीले ठक्कर दिँदा कसिस्माको ज्यानै गयो। त्यो २०७१ वैशाख १३… Read more »
भिसा कार्डबाट पैसा तिर्नुस्, नगद फिर्ता पाउनुहोस्
Posted 2:14 pm by siteadmin & filed under अर्थ.
तपाई हामी धेरैले किनमेल गर्दा नगदमार्फत नै भुक्तानी गर्छौँ। खल्तीमा डेविट कार्ड भइकन पनि सपिङ गर्न वा रेष्टुरेन्ट जाँदा एटिएमबाट पैसा निकालेर लैजाने गर्छौँ। कार्डबाटै रकम भुक्तानी गर्ने बानी धेरैमा विकास हुन सकेको छैन। कार्डबाटै भुक्तानी गराउने बानीको विकास गराउने उद्देश्यले विभिन्न बैंकहरुले भिसासँगको सहकार्यमा नगद फिर्ता योजना ल्याएका छन्। १६ बैंकको भिसा कार्डमार्फत पहिलो… Read more »
चापागाँउ सडक कालोपत्रे हुने
Posted 3:13 pm by siteadmin & filed under सामाजिक.
१५ चैत्र ०७५,चापागाँउ । चापागाँउ सातदोवाटो सडक तत्काल अस्थायी कालोपत्र गर्ने प्रकृया अघि बढेको छ । सडक विस्तारलाई पनि अघि बढाउदै तत्कालका लागि अस्थायी कालोपत्रे गर्न लागिएको हो । लामो समयसम्म सडक विस्तारको काम हुने अवस्था आउन सक्न आशंकामा सडक कालोपत्रे गर्न लागिएको हो । प्रतिनिधि सभा ललितपुर १ का सासंद नवराज सिलवालले ललितपुरमा आयोजित… Read more »
बोरिङबाट आएको पानी पिउन पाउँदा गोदावरी नगरका स्थानीय खुशी
Posted 8:37 am by siteadmin & filed under सामाजिक.
ललितपुर,लामो समयदेखि गोदावरी नगरपालिकाको पहलमा आजदेखि डिप बोरिङ मार्फत थप खानेपानीको सुचारु गरिएको छ । गोदावरी नगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सक्रियतामा सो कार्य सम्भव भएको हो । नगरपालिकाको वडा नम्बर १० मुलडोल र चारघरेमा सम्पन्न गरिएको बोरिङबाट खानेपानीको समस्याको समाधान भएको नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जनले बताउनुभयो । मुलडोलस्थित डिप बोरिङबाट ६ ईञ्चको… Read more »
ललितपुरमा असुरक्षित पेट्रोल पम्प
Posted 8:09 am by siteadmin & filed under सामाजिक.
४० लाख जनसंख्या बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश पेट्रोल पम्प सडकमै आइपुगेका, घरसँग जोडिएका र सघन बस्ती भित्र छन् । असुरक्षित यी पम्पहरू कुनै पनि बेला विपत्को कारक बन्न सक्छन् । भद्र शर्मा: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि जावलाखेल–पुल्चोक सडक खण्डमा पर्ने ‘एसपी इन्टरनेशनल इन्क’ नाम गरेको पेट्रोल पम्प पनि सडक किनारामै छ । नजिकै ‘युडी… Read more »